News - Ọdụdọ Ọpụpụ Egwuregwu
Ọdụdọ orùrù machining
Edm-eji tumadi machining Ebu na akụkụ nwere mgbagwoju shapes nke oghere na cavities; Nhazi dị iche iche conductive ihe, dị ka ike alloy na obi tara mmiri; Hazi oghere ndị miri emi ma dị mma, oghere ndị pụrụ iche pụrụ iche, oghere ndị miri emi, nkwonkwo warara na ịkpụ Mpekere dị larịị, wdg; Machining iche iche akpụ ngwá ọrụ, ndebiri na eri mgbanaka gauges, wdg.
N'oge EDM, ngwa ọrụ electrode na workpiece na-karị ejikọrọ na okporo osisi abụọ nke usu ike ọkọnọ na mikpuru na-arụ ọrụ mmiri mmiri, ma ọ bụ na-arụ ọrụ mmiri mmiri na-ebubo n'ime orùrù gap.The.The electrode na-achịkwa na-eri nri na workpiece site na ọdịiche akpaka akara usoro. Mgbe ọdịiche dị n’etiti electrodes abụọ ahụ rutere n’ebe dị anya, voltaji na-akwado ọkụ nke etinyere n’elu electrodes abụọ ahụ ga-emebi mmiri ahụ na-arụ ọrụ ma mepụta nchapu ọkụ.
Na ọwa micro nke ihapu, a na-etinye ike dị ukwuu nke ike ọkụ n'otu ntabi anya, ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịdị elu dị ka 10000 ℃ na nrụgide ahụ nwekwara mgbanwe dị nkọ, nke mere na ihe ndị na-achọpụta ihe na mpaghara na-arụ ọrụ nke ebe a ozugbo gbazere ma gbazee, ma gbapu n'ime mmiri mmiri na-arụ ọrụ, gbasie ike ngwa ngwa, mepụta ihe ndị siri ike, ma wepụ ya site na mmiri mmiri na-arụ ọrụ. N'oge a n'elu ọrụ ahụ ga-ahapụ obere akara olulu, mmiri ahụ kwụsịrị na nkenke, arụ ọrụ ọmụmụ n'etiti electrodes abụọ iji weghachi mkpuchi ọnọdụ.
Nke ọzọ usu voltaji ahụ gbarie na ọzọ mgbe ebe electrodes dịtụ nso na ibe ha, na-amị a ebua orùrù na-ekpeghachi usoro. N'ihi ya, ọ bụ ezie na ego nke metal corroded kwa usu-agbapụta bụ nnọọ obere, ọzọ metal nwere ike eroded ruru ruo puku kwuru puku ihe a na-ewepụta kwa nkeji, jiri aka ya rụpụta ihe ụfọdụ.
N'okpuru ọnọdụ nke na-edebe ọdịiche dị n'etiti elektrọnị ọrụ na ihe a na-arụ ọrụ, a na-arụzi ọla nke ihe a na-arụ ebe a na-enyezi electrode nke ngwa ọrụ n'ime ebe a na-arụ ọrụ, n'ikpeazụ, a na-arụzi ụdị kwekọrọ n'ụdị nke electrode. Ya mere, ọ bụrụhaala na ọdịdị nke electrode na ọnọdụ mmegharị dị n'etiti electrode na ihe arụ ọrụ ahụ, enwere ike ịkpụzi profaịlụ dị iche iche dị mgbagwoju anya. na nhazi dị mfe, dịka ọla kọpa, graphite, ọla kọpa-tungsten alloy na molybdenum.Na usoro nke ịkpụzi igwe, ngwaọrụ electrode nwekwara ọnwụ, mana ihe na-erughị ọnụọgụ nke metal workpiece, ma ọ bụ ọbụlagodi enweghị mfu.
Dị ka onye na-agbapụta mmiri, mmiri na-arụ ọrụ na-ekerekwa òkè na iwepụ na mwepu mgbawa n'oge nhazi ahụ. Mmiri mmiri na-arụ ọrụ na-ajụ obere viscosity, ọkụ ọkụ dị elu na arụmọrụ kwụsiri ike, dị ka manu oku, mmiri dechara na emulsion. ụdị ụdị ọ -ụ na-eme onwe ya obi ụtọ, njirimara ya bụ ndị a: electrodes abụọ nke ọkụ ọkụ nwere nnukwu ọkụ tupu ha agbapụta, mgbe electrodes abụọ ahụ na-abịaru nso, ndị na-ajụ ya agbaji, mgbe ahụ, ọkụ ọkụ ahụ na-apụta. ndị na-eguzogide n'etiti abụọ electrodes mbelata sharply, na voltaji n'etiti electrodes na-ebelata sharply.The ebua ọwa ga-emenyụ oge mgbe a nọgidere na-enwe maka obere oge (na-emekarị 10-7-10-3s) ịnọgide na-enwe “ oyi osisi ”e ji mara nke ebua orùrù (ie, okpomọkụ ike nke ọwa ike akakabarede adịghị eru omimi nke electrode na oge), nke mere na ọwa ike na-etinyere Mmetụta nke ike ọwa nwere ike ime ka electrode mebie obodo. methodzọ a na-esi eme ka mmebi ahụ na -emepụta mgbe ị na-eji nsị ọkụ na-arụ ọrụ akụkụ akụkụ nke ihe a na-akpọ igwe ọkụ ọkụ. Dika odidi nke ngwa oru electrode na njirimara nke ijeghari n'etiti electrode na ihe ndi ozo, enwere ike kewaa uzo ise n'ime uzo ise. arụ ọrụ na-agagharị tinyere ọdịdị na nha ahụ a chọrọ; , n'elu ike na ndị ọzọ dị iche iche nke processing.Edm nwere ike hazie ihe na mgbagwoju shapes nke siri ike ebipụ ndị nkịtị machining ụzọ.Ọ dịghị ike ọnwụ n'oge ịkpụzi; Adighi emepụta burr na ịkpụcha ahịhịa na ntụpọ ndị ọzọ; Ngwaọrụ electrode ekwesịghị ịdị ike karịa ihe eji arụ ọrụ; Ntuzi nke ike ọkụ eletrik, dị mfe iji nweta akpaaka; Mgbe emechara nhazi, elu na-arụpụta a metamorphosis oyi akwa, nke na ụfọdụ ngwa ga-n'ihu wepụrụ; Ọ bụ na-eweta nsogbu obibi anwụrụ ọkụ na-akpata site ọcha na nhazi nke na-arụ ọrụ ọmụmụ.
Gantry Single Head Mkpa egweri Machine, Gantry Double-End Mkpa egweri Machine, Gantry Mkpa egweri igwe, Gantry Single-End Mkpa-egweri igwe, Gantry Ugboro abụọ Head Mkpa egweri Machine, Gantry Type Mkpa egweri igwe,